ချိတ်ဆက်စကားလုံးများ (၂) (transitions and linking words - 2) - Myanmar Network
ချိတ်ဆက်စကားလုံးများ (၂) (transitions and linking words - 2)
Posted by zar ni (My Way!) on May 29, 2013 at 15:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Giving information which is against normal expectation ဖြစ်သင့်သည်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာဖြစ်သည့်အချက်အလက်ကိုတင်ပြခြင်း။ ရှေ့နောက်ဆန့်ကျင်တင်ပြခြင်း
20. His liver was in bad shape. That notwithstanding, he continued to drink.
သူ့အသည်းကအခြေအနေဆိုးနေပြီ။ သို့ဖြစ်လင့်ကစား သူကတော့ဆက်သောက်လျက်ပဲ။
21. He loved her very much. (ဒါပေမယ့်) However, he didn't ask her to marry him.
သူသည်သူမကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည်။ ဒါပေမယ့် သူမကိုလက်ထပ်ခွင့်မတောင်းခဲ့ပေ။
22. She hated him. (ဒါတောင်မှ) Even so, she accepted all of his dinner invitations.
သူမသည်သူ့ကိုမုန်းသည်။ ဒါတောင်မှ သူမသည်သူ၏ဖိတ်ကြားမှုများအားလုံးကို လက်ခံခဲ့ ည်။
23. The boy got F's on all his exams. All the same, the teacher passed him.
24. I wasn't hungry. (ဒါတောင်မှ) Still, I had dinner with the family and atealot.
ကျွန်တော်မဆာပါဘူး။ သို့ပေမယ့် မိသားစုနဲ့ညစာ အများကြီးစားခဲ့တယ်။
25. I hated that job withapassion. (သို့သော်ငြားလည်း) Nevertheless, I stayed for ten years.
အဲဒီအလုပ်ကို သိပ်မုန်းတာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆယ်နှစ်တော့နေခဲ့သေးတယ်။
26. She spent hours in the hot kitchen. (သို့သော်ငြားလည်း) Regardless, he didn't touch her food.
သူမနာရီပေါင်းများစွာပူပူလောင်လောင်နဲ့မီးဖိုထဲမှာချက်ပြုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါတောင်မှ သူမ ချက်ပြုတ်ထားတာကို သူတို့တောင်မတို့ဘူး။
giving the bright side or the sad side အဆိုးထဲမှအကောင်းကိုပြောပြခြင်း
27. She was hit byacar. Fortunately, she wasn't killed.
ကားနဲ့အတိုက်ခံရတာ။ ကံကောင်းလို့ အသက်မသေတယ်။
28. He lost his house in the hurricane. Happily, his whole family survived.
မုန်တိုင်းမှာသူ့အိမ်ပါသွားတယ်။ ပျော်ရွှင်စွာပဲ သူတို့မိသားစု လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။
29. She inheritedamillion dollars. Unfortunately, she invested the money badly.
သူမ အမွေတစ်သန်းရခဲ့တယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
30. He did everything to make her happy. Sadly, she never grew to love him.
သူမပျော်ဖို့ သူဘာမဆိုလုပ်ခဲ့တယ်။ စိတ်မကောင်းစရာပဲ သူမကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ချစ်မ လာဘူး။
showing consistencies and similarities ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၊ အသွင်တူမှုကိုပြခြင်း
31. He worked hard to make his wife happy. Likewise, she took good care of him.
သူက မိန်းမကိုပျော်အောင်ကျိုးစားလုပ်ကိုင်တယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ သူမကလည်း သူ့အပေါ်ပြန် ဂရုစိုက်တယ်။
32. He treated his workers well. In the same way, he did everything for his kids.
သူကအလုပ်သမားတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်။ ဒီလိုပဲ သူ့သားသမီးတွေကိုလည်း ဆက်ဆံတယ်။
33. The lady was an angel. Similarly, her husband helped the poor in their town.
အမျိုးသမီးကတော့ နတ်မိမယ်အလားပဲ (တင်စားပြောသည်)။ ထို့အတူပင် သူ့ခင်ပွန်းကလည်း သူတို့မြို့က ဆင်းရဲသားတွေကို ကူညီတတ်တယ်။
showing inconsistencies or dissimilarities ရှေ့နောက်မညီညွတ်မှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဖော်ပြခြင်း
34. He was handsome and smart. On the other hand, he dressed very badly.
သူက ရုပ်ချောပြီးထက်မြက်တယ်။ အခြားတစ်ဘက်မှာတော့ အ၀တ်အစားဝတ်တာဆိုးတယ်။
35. Falcons fly 200 miles per hour. In contrast, ostriches can't fly at all.
သိမ်းငှက်များသည် တစ်နာရီမိုင် ၂၀၀ နှုန်းဖြင့်ပျံသန်းကြသည်။ ဆန့်ကျင်စွာပင် ငှက်ကုလား အုပ်များသည် လုံးဝမပျံနိုင်ကြချေ။
stating what is clearly true or probably true ထင်ရှားသည့်အမှန်တရားကိုဖော်ပြခြင်း။ ဖြစ်နိုင်သည့်အမှန်တရားကိုဖော်ပြခြင်း
36. He sang and danced on his way to work. Obviously, he liked his job.
အလုပ်သွားရင်း ဆိုလိုက်ကလိုက်နဲ့။ သူ့အလုပ်ကိုသူကြိုက်တာ အထင်အရှားပဲ။
37. He always took his kids to the park. Undoubtedly, he loved themalot.
ကလေးတွေကို သူ ပန်းခြံကို အမြဲတမ်းပို့ပေးတယ်။ ကလေးတွေကို ကိုသူချစ်တာ သံသယ ရှိစရာမလိုဘူး။
38. He gave vacation time and sick leave. Surely, his workers appreciated it.
အားလပ်ရက်အချိန်တွေနဲ့ခွင့်တွေသူပေးခဲ့တယ်။ သူ့အလုပ်သမားတွေ သဘောကျတာ အသေအချာပေါ့။
39. He was invited to all the parties. Indeed, he was quite popular.
ပါတီပွဲအားလုံးကို သူ့အားဖိတ်ကြားခံရတယ်။ အမှန်စင်စစ် သူဟာလူအများနှစ်သက် တဲ့သူပါ။
40. He kept closing his eyes while I was speaking. Apparently, he hadn't slept well.
ကျွန်တော်စကားပြောနေတုန်း သူမျက်လုံးတွေကိုပိတ်ပိတ်ထားတယ်။ သူကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရတာ အထင်အရှားပဲ။
41. He couldn't recognize his friends. Possibly, he had Alzheimer's disease.
သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို သူမမှတ်မိဘူး။ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါရနေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
showingadirect result တိုက်ရိုက်ရလာဒ် ကိုဖော်ပြခြင်း
42. We were tired and hungry. Therefore, we stopped to rest and eat lunch.
ကျွန်တော်တို့ ဆာလောင်မောပန်းနေကြပြီ။ ဒါကြောင့် အပန်းဖြေနေ့လည်စာ စားသောက်ဖို့ရပ်ခဲ့တယ်။
43. He went out dancing every week night. Consequently, he failed his class.
သူညတိုင်း သွားကခဲ့တယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ သူ့စာမေးပွဲ ကျခဲ့တယ်။
44. He studied hard and did all his homework. Thus, he got A's most of the time.
သူစာကျိုးစားပြီး အိမ်စာတွေလည်းအကုန်လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းလိုလို “အေ” အဆင့်ကအောင်တယ်။
45. He worked seven daysaweek, twenty hoursaday. Asaresult, he got sick.
သူတစ်နေ့နာရီနှစ်ဆယ်။ တစ်ပတ် ခုနှစ်ရက်အလုပ်လုပ်တယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ ဖျားတော့တာပဲ။
ဒါကတော့ transitional words တွေကိုနမူနာဝါကျတွေနဲ့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တွင် ဘယ်လိုအချိတ်ဆက်မိမိသုံးစွဲသလဲဆိုတာ အောက်ပါ စာပိုဒ်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်လျှင် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
On reflection, I really loved Larryalot, but I knew I shouldn't keep going out with him! First of all, he cursed and swore all the time, on the street and even in church! Secondly, he dressed likeachild, in torn, dirty jeans.
At first, I thought he was youthful and free-spirited, but then I realized that he was just immature. Next, I found out that he still lived with his mother, andalittle later, I found out that he didn't even haveajob. After this, somebody told me that he was living on money that his dead father had left him and that he had never workedaday in his life.
After some careful thought, I told him to stop calling me, but despite that, he kept leaving messages on my phone. Soon he gave up calling me, and finally, I was rid of him.
Gradually, I got used to being without him even though I missed him. Little by little, I started going out again, and afterawhile, I met some really nice guys at parties. After some time, I began dating men, and eventually, I met Harold, who is my current husband.
Hopefully, my daughter will meet somebody who is funny and free-spirited like Larry was, but, with any luck, he will also be responsible and considerate like her father is. In the future, I will be ready to give heramother's advice when she starts dating men.
- ယခုလ (May 2013) မှစ၍ အသင်းဝင်များကို လစဉ် ၁၀၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ၁၀ ကဒ်ကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်အချင်းချင်း အွန်လိုင်းမှ စကားပြော (Chat) နိုင်မည်၊ Message ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community asamember so you can enjoy the above benefits.
With more than 49,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free!
Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on May 30, 2013 at 11:09
Permalink Reply by Tainhlwar on June 1, 2013 at 15:45
Permalink Reply by Soe Soe on June 1, 2013 at 17:37
Permalink Reply by myokyawkyaw on June 1, 2013 at 22:02
Permalink Reply by sikedeveechan on June 1, 2013 at 23:02
Permalink Reply by Rihanna on June 2, 2013 at 8:56
Permalink Reply by Nilar Win on June 2, 2013 at 9:46
Permalink Reply by saw april on June 2, 2013 at 20:10
Permalink Reply by Ei Haymar on June 3, 2013 at 9:39
Sir I want to know transitions and linking words - 1 . Where I can read it??? Can u attach with 1 link?
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on June 3, 2013 at 9:58